Tani waa nooca SOO SAARKA (RED) ee iPhone X u ekaan lahaa | Wararka IPhone
Tani waa nooca PRODUCT (RED) ee iPhone X u ekaan lahaa
ka Xogta iibka iPhone X aad ayey u fiicnaayeen, ugu yaraan kuwii ugu dambeeyay ee ay soo bandhigtay Apple bilo yar ka hor. Si kastaba ha noqotee, waxaa la rumeysan yahay in lambarradu aysan ahayn wixii ay Apple filaysay taasna waxay sababtay inay wax u guuraan Cupertino. Wararkii ugu dambeeyay waxay soo jeedinayaan in Apple ay u maleyneyso inay dib u soo cusbooneysiineyso nooc ka duwan aaladda Apple si loo kordhiyo iibka iPhone X.
El IPhone X SOO SAARKA (CAG) Waxay noqon kartaa mid ka mid ah xulashooyinka ay doorteen shirkadda weyn ee Apple si loo kordhiyo iibka loona gaaro tirooyinkii uu lahaa Apple markii la bilaabay. Martin Hajek wuxuu hindisay jees jees ku saabsan sida qaabkani u noqon karo mid wax ka tari kara la dagaallanka HIV.
IPhone X PRODUCT (RED) waxay run noqon kartaa goor dhow
Kow iyo tobankii sano ee la soo dhaafay, waxaan iskaashi kala sameynay (RED) barnaamijyada HIV / AIDS ee bixiya la talinta, baaritaanada cudurka iyo daawooyinka si looga hortago isu gudbinta hooyada iyo dhallaanka ee HIV. Ilaa maanta, waxaan ka aruurinnay wax ka badan $ 160 milyan iibinta alaabada (RED). Iibsasho kastaa waa hal talaabo oo dheeraad ah oo loo qaado jiil aan lahayn AIDS.
Dareenka SOO SAARKA (CAG) way cadahay: in laga caawiyo kahortaga iyo kobcinta cilmi baarista la xiriirta HIV. Waxaa jira alaabooyin gaar ah oo ku dhex yaal mashruucan kaas oo ay Apple ka caawiso hawshan dhibka badan. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Apple ay la jaanqaadi karto nashqadda iPhone X-ga hadda ah moodel ay waxtarkeedu ka faa’iideysan doono mashruucan.
Maqnaanshaha xaqiijinta rasmiga ah, Martin Hajek ayaa sameeyay a tusaale iyo fiidiyoow ah nooca iPhone X ee astaamahan u ekaan lahaa. Sida aan arki karno, dhabarku wuxuu isu rogi doonaa midab casaan dhalaalaya, maaddaama dhabarka qalabka uu ka samaysan yahay muraayad. Taabadalkeed, qormooyinka iyo hore waxay sii ahaanayaan madow, si aaladda loo siiyo qaab isu eg.
Miyaanu ugu dambayn ku arki doonnaa qalab ka mid ah astaamahan dhowaan Dukaanka Apple? Waxay noqon laheyd hab wanaagsan oo dib loogu soo celiyo iibinta iPhone X wajiga tirada lama filaanka ah ee aaladaha ay iibisay Big Apple.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Tani waa nooca PRODUCT (RED) ee iPhone X u ekaan lahaa
Apple Watch malahan mitirka gulukooska, ugu yaraan hada
Ruqsadihii ugu dambeeyay ee Apple waxay ka hadlaan baytariyada jilicsan iyo saamaynta 3D ee bandhigyada 2D